Qiimaha ugu wanaagsan ee mobilada | Hada ku keydi biilkaaga | Wararka Gadget
Qiimaha mobilada ugu fiican ee laga heli karo suuqa
Muddo aan sidaa usii fogeyn, isticmaale kasta oo aaladda moobaylka ah wuxuu kala dooran karaa xoogaa qiimayaasha moobiilka, kuwaas oo inta badan aad isugu eg oo ay tahay inaan ku bixinno lacag aad u tiro badan. Nasiib wanaagse, wax walbo waqti badan ayey isbedeleen maantana tiro wanaagsan oo ka shaqeeya mobilada ayaa ku sugan suuqa kuwaasoo na siiya qiimo aad u fara badan oo mobilada ah. Qaarkood aad ayey u jaban yihiin, kuwaas oo faraq weyn ku kala dhexeeya iyaga iyo waliba qiimaha ugu kala duwan. Si tan loo sameeyo maanta waxaan sameyn doonnaa isbarbardhig xiiso leh oo u dhexeeya dhammaantood. Maaddaama ay adag tahay in laga bilaabo meel, waxaan sameyn doonnaa annaga oo dib u eegayna saddexda ugu sarreysa ee aan kiraysan karno hadda:
Qiimaha ugu jaban 8GB oo simyo ah € 5
Heerka ugu dhameystiran: 15GB iyo Virgin Telco aan xadidnayn oo keliya € 9
Heerka mobilada ugu fiican: 25GB iyo finetwork aan xadidnayn oo keliya € 14,90
Waddankeenna wali waxaa ka shaqeeya seddex shirkadood oo waawayn sida Movistar, Vodafone iyo Orange, waxaa ku xigay masaafo fog oo horey u jiray sida MásMóvil (xusuusnow inay heshay Yoigo si ay u siiso koror muhiim ah) iyo tii ugu dambeysay ee Virgin Telco oo lagu taageeray duulaanka qaran ee kooxda Euskaltel. Hareerahaas waxaan ku leenahay kuwa loogu yeero hawl wadeennada dalwaddii ee na siiya qiimeyo xiiso iyo jaban.
Rate Abuur Qiime U Gaar Ah 10GB Simyo 10GB € 6 / bishii
Qiimee 14.95 Amena 20GB iyo aan xad lahayn. € 14.95 / bishii
Qiimee Plus 8GB wicitaano aan xadidneyn iyo 8GB € 8.90 / bishii
Heerka La SinFin xog aan xadidnayn iyo wicitaano aan xadidnayn € 35 / bishii
Tag heerka Oranka Sare Xog aan xadidnayn iyo wicitaano aan xadidnayn € 35.95 / bishii
Haddii aad ka fekereyso inaad bedesho hawlwadeenada ama aad qiimaha wax ka bedesho, nala joog sababtoo ah Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa qiimaha ugu raqiisan uguna jaban ee mobilada laga helo suuqa.
6 Taleefanka gacanta
Waqtiga xaadirka ah qiimaha mobilada loogu talagalay Yoigo Waxay ka mid yihiin kuwa ugu soo jiidashada badan suuqa, badanaa sababtuna tahay tirada badan ee GB ee ay siiyaan dadka isticmaala, qiimahooduna aad u hooseeyo. Dad badan oo isticmaala ayaa baaraya shabakadaha shabakadaha muddo dheer, mararka qaarkood waxay u baahan yihiin wicitaano yar iyo ka yar waxayna u baahan yihiin waxyaabo badan oo ay ku heli karaan xog ay ku isticmaali karaan WhatsApp, Facebook ama mid ka mid ah barnaamijyada kale ee badan ee u baahan inay si joogto ah ugu xirnaadaan internetka.
Yoigo wuxuu ku guuleystey inuu soo qabto baahidaas dhammaan adeegsadayaasha aan ku dhamaan karin megabytes qorshahooda xog. Xaqiiqdii, waad ogtahay qiimaheeda ugu caansan: La SinFín. Heerkani wuxuu leeyahay GB aan xadidnayn si uu ula socdo mobilkaaga, marka lagu daro, wuxuu leeyahay wicitaano aan xadidnayn. SinFín de Yoigo waa mid ka mid ah qiimaha yar ee bixiya tiro aad u badan oo gigabyte ah oo lagu qarash gareeyo € 35 / bishii. Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhimistaan ​​khidmaddaada bil kasta ah waad awoodaa halkan ka samee.
Dhowr bilood gudahood MásMóvil ayaa ka soo baxay shirkad la'aan iyada oo aan suuqa joogitaan badan laga helin iyada oo ah hawl wadeen taleefan gacmeed noqo afaraad shaqaale Isbaanish ah, iibsiga Yoigo.
Qiimaha qiimaha ee MásMóvil wuxuu u qaybsan yahay laba: qiimayaasha uu horay u qaabeeyay Hawl wadeenku iyo qiimayaasha aad u qaabeyn karto sida aad jeceshahay. Qorshayaasha ay MásMóvil na siiso waa laba: 8 GB iyo wicitaano aan xadidneyn oo ah € 8,90 saddexda bilood ee ugu horreysa iyo 20GB oo leh wicitaanno aan xadidnayn oo for 14,90 ah.
Wicitaanada aan xadidnayn waa hooseeyaha guud ee heerarka horay loo qaabeeyey ee 'MásMóvil'. Laakiin haddii aad tahay qof ku hawlan wax ka badan wadahadalka taleefankaaga gacanta, ikhtiyaarka ugu fiican ee adiga ayaa noqon kara inaad qaabeysid heerkaaga si aad u cabirto. Sidan oo kale, waxaad ku dari kartaa xaddiga ugu badan ee gigs (20GB) oo waxaad ku wacdaa 0 senti daqiiqaddii. Qaabeyntaas waxaad awoodi doontaa inaad keydiso xoogaa yuuro ah marka loo barbar dhigo kan MásMóvil uu horey ugu haysto 8GB.
Qandaraas mid ka mid ah qiimayaashan adigoo gujinaya halkan.
Orange ayaa haatan ku jira dalab adag oo ay la socdaan Vodafone si ay u yeeshaan mudnaan ah inay noqdaan hawlwadeenka labaad ee moobiilka ee suuqa. Tan awgeed waxay sameysay cusboonaysiin dhammaan qiimayaasheeda muddooyinkii ugu dambeeyay, taasoo ka dhalatay buugga ugu ballaaran uguna xiisaha badnaa. Toddoba sano ka dib mar dambe ma heli doonno khidmadaha caanka ah ee xoolaha, laakiin waxaan siinnay waddada Qiimaha tag.
Isticmaalayaasha sida aadka ah u dalbanaya xagga tirada iyo tayada ayaa nasiib ku jira, maxaa yeelay heerarka Go ayaa si sax ah uga jawaabaya qodobbadaas. Dareenkan, Orange wuxuu na siiyaa sicirka Sare u kac oo kor u kac, oo labaduba leh xog aan xadidneyn, farqiga dalab kastaa wuxuu kujiraa awoodda lagu daawan karo waxyaabaha qulqulka leh oo leh tayo sare (mid HD ah iyo kan kale ayaa gaadhay 4K) iyo labadaba wicitaano aan xadidnayn.
Laakiin qiimayaasha leh gigabytes aad u fara badan oo ay ku socdaan ma ahan dhagaystayaasha oo dhan waana wax ay Orange ka fakartay. Sababtaas oo kale, waxay ku bixisaa seddex qiime oo kale riwaayado ka yar: Muhiim, Go Dabacsan iyo Carruurta. Iyada oo Muhiim ah, Orange waxay na siisaa 7GB oo waxay ku soo wacdaa 0 senti € 14,95 / bishii. Heerka Olex ee Go Flexible wuxuu ina siinayaa suurtagalnimada inaan haysanno 16,67GB iyo wicitaanno aan xadidnayn oo ah € 24,95 / bishii. Ugu dambeyntiina, Qiimaha Carruurtu waxay leeyihiin internet illaa 2GB ah .8,95 XNUMX / bishii oo ku habboon kaniiniyadaada ama laptop-yada. Haddii aad xiiseyneyso qiimaha Go de Orange, waad awoodi kartaa halkan si fudud uga kireysto.
Shirkadda guduudan waa mid kale oo ka mid ah kuwa waaweyn ee ka jira dhulka Isbaanishka, dabcan sidoo kale waxay na siisaa dhowr qiimeyn moobiillo ah oo keliya. Sida Orange ama Movistar, Vodafone waxay na siisaa dhammaan noocyada qiimayaasha, oo leh astaamo iyo noocyo kala duwan oo noocyo badan leh.
Shirkadda casaanka waxay ku dhowdahay dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, laga soo bilaabo kuwa sida ugu badan u cuna megabeytyada iyo daqiiqadaha kuwa yar ama mid kale ku qarash gareeya. Sidaas, waxaan leenahay Mobile Mini, aan xadidneyn, aan xadidneyn Maxi iyo wadar aan xadidneyn kuwa wax badan u cuna marka loo eego xogta iyo daqiiqadaha codka.
Kuwa inta badan hadlaya oo cuna xogta, Vodafone waxay soo bandhigaysaa wadar aan xadidnayn GB oo aan xadidnayn 5G, daqiiqado aan xadidnayn. Dhammaan waa € 47,99 / bishii. Heerka dhexe waa midka aan xadidneyn Maxi oo leh GB aan xadidneyn 4G + network, daqiiqado aan xadidneyn. Waxaas oo dhan waa € 36,99 / bishii. Ugu dambeyntiina, aan xadidneyn waa dalab leh xog aan xadidneyn oo ku jirta shabakadda 4G (ugu badnaan xawaaraha soo dejinta 2Mbps) iyo daqiiqado aan xadidneyn oo ah .32,99 XNUMX bishiiba.
Haddii aad xiiseyneyso qiimaha moobilada ee Vodafone, waad ku kireysan kartaa wax ka yar 3 daqiiqo halkan.
Movistar ama wixii lamid ah, Telefónica-kii hore ayaa xukuma weyn ee suuqa mobilada mobilada, iyada oo ay ugu wacan tahay sida wanaagsan ee ay uga faafinayso ku dhowaad gees kasta oo ka mid ah wadankeena iyo waliba adeegga wanaagsan ee ay u fidiso macaamiisheeda. Nasiib darrose qiimahoodu uma hooseeyaan sida inteena badani u jeclaan lahaayeen.
Sida ay inta kale ee hawl wadeennada ahi sameeyeen, Movistar sidoo kale wuxuu wax ka beddelay dalabkiisa qiimaha moobiilka, in kasta oo aanu si qoto dheer u ahayn sida Orange ay samaysay. Dareenkan, Movistar wuxuu noo soo bandhigayaa seddex qiime, oo tirada gigabytes-ka badan ay ka dhex muuqdaan.
La Movistar qandaraaska 2 heerka Waxaa loo kala saari karaa inay tahay "heerka aasaasiga ah", maadaama ay na siinayso 5GB si aan ula socono moobilkeena iyo 50 daqiiqo oo wicitaanno ah € 15 / bishii. Haddii aan u gudubno faylalka Movistar, sicirka xiga waa XL Contract oo na siiya 15GB iyo daqiiqado aan xadidneyn oo wicitaanno ah oo loogu talagalay khadadka guryaha iyo moobiillada for 24,95 bishiiba. Qiimaha ugu dambeeya, qandaraaska aan dhammaadka lahayn, wuxuu leeyahay GB aan xadidnayn, daqiiqado iyo SMS qiimaha of 39,95 / bishii.
Mid kale oo ka mid ah hawlwadeennada dalwaddii ee seegi karay liiskan ayaa ah Taleefanka gacanta taasi waxay na siisaa qaar ka mid ah heerarka ugu tartamada badan, dhammaan dhinacyada aan ka heli karno suuqa. Gaar ahaan, waxay na siisaa saddex qiime oo aad u tartamaya marka laga hadlayo inta kale ee suuqa. Sidan oo kale, waxaan ku helnaa sicirka ugu horreeya oo ay ku jiraan 5GB iyo wicitaano aan xadidnayn oo ah € 7,90 / bishii. Heerka dhexe wuxuu na siinayaa 10GB iyo daqiiqado aan xadidneyn oo ah .11,90 XNUMX bishiiba.
Ugu dambeyntii, waxaan helnaa waxa laga yaabo inay tahay heerka ugu faa'iidada badan: 39GB iyo daqiiqado aan xadidneyn oo loogu talagalay wicitaanada .19,90 XNUMX / bishii.
Haa sxb, Amena waa soo noqotay. Hawlwadeenka cagaaran ayaa waheliyay inbadan oo naga mid ah waqtigaas, waxaan dhihi karnaa, waa wax caadi ah markay tahay taleefanka gacanta. Amena waxay ku soo noqotay nolosheeda mahadsanid liin dhanaan qiimihiisuna waa cajiib. Hawlwadeenkani wuxuu la mid yahay la qabsiga waxayna si cad ugu muujinayaan qiimahooda. Qorshayaasheeda moobiilku waxay diiradda saarayaan nooc kasta oo adeegsade ah: hal qiimahood kuwa adeegsada taleefannadooda yar, mid kalena kuwa hadalka yar iyo laba kuwa doonaya wax walba. Afar qiimo heer sare ah.
Qiimaha ugu horreeya waxaa loogu talagalay kuwa aan si adag ugu isticmaalin taleefankooda banaanka guriga. Amena iyaga ayaa ka fikiray waxayna siisay 4GB, waxay ku wacdaa 0 senti daqiiqadii iyo SMS aan xadidnayn oo ah € 6,95 / bishii. Laakiin haddii aad waxyar ka hadasho taleefankaaga gacanta, waxaad u maleyneysaa inaad xiiseyneyso qiimaha oo leh 10GB, daqiiqado aan xadidnayn iyo SMS aan xadidnayn oo ah for 9,95 bishiiba.
Shirkadda cagaaran waxay ku siineysaa qorshe mobilo leh 25GB, wicitaano aan xadidneyn iyo SMS € 19,95 / bishii. Laakiin haddii 10GB uusan kugu filnayn, qorshaha ugu dambeeya ayaa xitaa kaa xiiso gelin doona. Qiimaha ugu dambeeya wuxuu ku siinayaa 30GB, wicitaano aan xadidneyn iyo SMS € 24,95 / bishii.
Waan ognahay inay aad u adag tahay in la doorto heerka Amena, sababtoo ah runti way wanaagsan yihiin. Haddii aadan weli go'aansan, xiriirkan waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah.
Liin macaanta Simino maahan wax kadis ah kani sidoo kale waa shirkad ay iska leeyihiin kooxda Orange. Si kastaba ha noqotee, Simyo waxay leedahay muuqaal naadir ah oo ficil ahaan u gaar ah: waad abuuri kartaa sicirkaaga. Waxaad ku habeyn kartaa qorshahaaga xog badan ama ka yar iyo daqiiqado ama cod ka yar ama ka yar. Waxa aad rabto.
Kahor sharraxida sida qaabeynta sicirka shaqsiyeed u shaqeeyo, waxaan rabaa inaan kuu sheego qiimaha ay Simyo horey kuugu siisay inaad qaabeysay. Shirkaddu waxay noo soo bandhigaysaa afar qiime oo aan qandaraas ku qaadan karno. Waxaan leenahay sicirro aan kooto lahayn, taasi waa, 0 euro. Waxaan haynaa qiime yar oo ay ku jiraan 20 daqiiqo oo wicitaanno ah iyo 100MB B 2 bishiiba. Qiime ku habboon WhatsApp oo leh 50 daqiiqo oo wicitaanno iyo 100MB ah € 3,5 / bishii. Qaybta horena waxaa loogu talagalay kuwa hadlaaya oo wax badan faafinaya. Tani waxay na siinaysaa 100 daqiiqo iyo 2GB oo ah .6,5 XNUMX bishiiba.
Haddii qiimayaasha kor ku xusan midkoodna uusan ku qancin, xusuusnow inaad abuuri karto mid kuu gaar ah hab aad u fudud. Waxa ugu horreeya ee aad dooran doontaa waa xogta si aad ula socoto moobilkaaga. Ma dooran kartid xogta si aad u daalacato, laakiin ugu badnaan 40GB. Hadhow, waa inaad doorataa tirada daqiiqadaha aad wacayso, min 0 daqiiqo illaa wicitaanno aan xad lahayn. Taladayada, kiiskan, waa mid aad u cad: samee qiimeyn adiga kuu gaar ah. Ma jiraan wax ka fiican inaad awoodid inaad doorato waxaad rabto inaad kubixiso xaga xogta iyo daqiiqadaha codka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad aragto inta ka hartay fursadaha ay Simyo bixiso, halkan soo gal.
Lowi waa mid ka mid ah shirkadaha taleefannada gacanta ee sida fiican u qiimeeya dadka isticmaala, iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaheeda dhaqaale ee ugu badan iyo suurtagalnimada in la abuuro sicirka gebi ahaanba sida aan u jecel nahay. Waad lahaan kartaa oo aad ku habeyn kartaa qiimahaaga 8GB illaa 30GB xogta mobiilkaaga, marka la eego daqiiqadaha codka, dhammaantood waxay leeyihiin wicitaano aan xad lahayn.
Haddii ay tahay inaan la joogno mid ka mid ah siciradooda, taasi shaki la’aan waxay noqon doontaa heerkaaga Naftaada oo leh 8GB € 7,95 bishiiba. Qiimo aad u sarreysa oo ficil ahaan aan laga adkaan karin. Waxaad arki kartaa inta hartay ee suurtogalka ah qiimee dejinta iyo astaamaha halkan.
Qadar intee le'eg ayaad hadda qandaraas qaadatay oo midkee ayaad beddeli lahayd haddaad awooddo? Sidaad u aragto, fursadaha ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn wax walbana adigay kugu xidhan yihiin. Ha dagin hanala soconin soo galkan maxaa yeelay waanu cusbooneysiin doonaa bil kasta. Hadana hadaadan ka helin heerkaaga saxda ah halkan, marwalba waad isticmaali kartaa Roams isbarbardhigaha taleefanka inaad hesho ikhtiyaarka ugu fiican ee kuu oggolaanaya inaad kaydiso.